६ दिन पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं : महामन्त्री झा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
६ दिन पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं : महामन्त्री झा
अब सरकार राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय घेराबन्दीमा पर्ने दाबी
शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महामन्त्री केशव झाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै महामन्त्री झाले भने, ‘सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन अब फिर्ता लिन्छौं । काउन्टडाउन सुरु भैसक्यो । हामीले छठ सकिएलगत्तै १० दिनको समय दिएका थियौं । आज चार दिन बितिसक्यो । अब ६ दिन बाँकी छ । हामी अहिले बाध्यकारी अवस्थामा छौं । अब समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्छौं ।’
नेता झाले आफूहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दशैंअघि समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामीले त उहाँलाई भेटेरै समर्थन फिर्ता लिनेबारे अल्टिमेटम दिएका थियौं । तर, उहाँले दशैंको टिका अगाडि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्नुभयो । हामीले चाडपर्व भएकोले छठ सकिएलगत्तै १० दिनको समय दिएका थियौं । तर, आज चार दिन बितिसक्यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै सुरसार देखाएको छैन् ।’
सरकार बनेको ९ महिना बितिसक्दापनि सरकारले संविधान संशोधनको लागि आजसम्म ईमान्दार प्रयत्न नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘सरकारले साँच्चीकै ईमानदार भएर प्रयत्न गर्ने हो भने हप्ता दश दिनभित्र संशोधन हुन्छ । तर, सरकारले हामीलाई बारम्बार धोका दियो । अब त हाम्रोपनि धैर्यताको बाँध टुट्यो ।’
मधेशी जनताले आफूहरुलाई संविधान संशोधन नहुने भए आन्दोलनका लागि मधेश झर्न थ्रेट दिईसकेको पनि उनले सुनाए । ‘हामी अहिले बाध्यकारी अवस्थामा छौं’– झाले थपे, ‘जनताले संशोधन नहुने हो भने काठमाडौं नबस्नुहोस, मधेश झर्नुहोस भनेर हामीलाई थ्रेट नै दिईसके । अब हामी यो ६ दिन पर्खिन्छौं । त्यसपछि पनि केही नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको लागि मधेश झर्छौं ।’ यद्यपी झाले आन्दोलनको लागि आफूहरु अहिले व्यग्र नरहेको र रहर पनि नभएको जिकिर गरे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रपनि अहिले डामाडोल भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सेयर अहिले लगातार ओरालो झरिरहेको छ । विज्ञता हाँसिल गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उहाँको संकुचित सोचका कारण मुलुकमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अहिले बनेको छैन् ।’
सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा हटेको भनेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नाटक देखाएको पनि उनले आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘खोई, कहाँ हटेको छ सिण्डिकेट ? सिण्डिकेट त नाम मात्रै हट्यो, तर व्यवहारमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । त्यतिमात्रै होईन, उहाँले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई तह लगाउँछु भन्नुभयो । तर, अहिलेसम्म केही पनि गर्न सक्नुभएन् । ठेक्का दिने प्रक्रियामै त्रुटि छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यसको लागि नियम र कानुन बनाउनुपर्छ ।’
PREVIOUS POST Previous post: पत्रकार शाहीलाई धम्की, यस्तो छ मेयरको विज्ञप्ति रातारात समाचार ‘डिलीट’
NEXT POST Next post: माइक्रो बसका चालक र सहचालकले आजदेखि फ्लोरेसेन्ट ज्याकेट लगाउनुपर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, मंसिर १, २०७५ १८:०६